Manni Maree Nageenyaa UN, waraanni atattamaan akka dhaabatu’ waamicha godhe | OROMOTV
Manni Maree Nageenyaa UN, waraanni atattamaan akka dhaabatu’ waamicha godhe
6 Sadaasa 2021
Manni Maree Nageenyaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii marii dhimma waraana Itoophiyaarratti gaggeesseen sagalee tokkoon waraanni atattamaan akka dhaabbatuufi waliigalteen dhukaasa dhaabuu waaraan akka raawwatamau gaafate.
(OROMOTV) Manni Maree Nageenyaa dhimma Itoophiyaarratti irra deddeebiin marii kan gaggeesse ta’us miseensonni mana marichaa aangoo guddoo qaban gidduutti ejjannoon walfakkaataan waan hin turreef ibsa waloollee baasuun hin danda’amne ture.
Waliigahi Jimaataa kanas Aayarlaandi, Keeniyaa, Niijer, Tuniiziyaa, Seent Viinsant fi Za Giriinaadiins biyyoota manni marichaa walgahee dhimma waraana Itoophiyaa irratti akka mari’atu gaafatan.
Waraanni Kaaba Itoophiyaa waggaa tokko guute akkamiin xumura argata?
Manni Maree Nageenyaa UN dhimma Itoophiyaa irratti akka walgahu gaafatame
Gareewwan finciltootaa sagal ‘bulchiinsa MM Abiy kuffisuuf’ qindoomina uuman
Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti ambaasaaddar US kan ta’an Liindaa Toomaas Giriin Fiild manni marichaa ”haala murteessaa ta’ee fi sagalee tokkoon waraanni atattamaan akka dhaabbatuufi waliigalteen dhukaasa dhaabuu waaraan akka raawwatamu gaafateera” jedhan.
”Hanguma waraanni kun itti fufeen, daandiin gara nagaatti dhufuu ulfaataa deemas” jedhan.
Miseensonni mana maree kanaa waraannichi hammaachaa deemuutti yaaddahuu ibsi manni marichaa baase ni hubachiisa.
”Miseensonni Mana Maree Nageenyaa haasaawwan jibbinsaa hamoo ta’aniifi jeequmsaafi walqoodinsa uuman irra hunduu akka of qusatu gaafataniiru.”
Ibsi mana maree nageenyaa akka jedhutti miseensonni seeronni namoomaa idila addunyaa akka kabajaman, deeggarsi danqaa malee akka dhiyaatu, bulchiinsi uummata akka deebi’u fi deeggarsi namoomaa akka cimu gaafataniiru.
”Itti dabaluunis waraanni dhaabatee waliigalteen dhukaasa dhaabuu waaraan akka waliigalamuufi mariin biyyaalessaa biyyattii keessatti nageenyifi tasgabbiif bu’uura kaahu akka eegalamu waamicha godhaniiru.”
Miseensonni mana marichaa yaalii Gamtaan Afrikaafi qaamoleen biroon naannicha waraana kanaaf fala gochuuf tattaaffii godhan akka deeggaran ibsaniiru.
Itti dabaluunis miseensonni ”walabummaa biyyaa fi siyaasaa, akkasumas tokkummaa Itoophiyaa kabajuu irratti murannoo qaban ibsaniiru.
Biyyoota walgahiin kun akka gaggeefamu waamicha godhan keessaa tokko kan taate Ayeerlaand amma duras dhimma waraana Itoophiyaarratti manni marichaa akka walgahu gochuu dandeessuus, hanga ammaatti garichi ibsa waloo baasuurratti osoo wal hin ta’iin hafee ture.
Manni marichaa dhimma waraana Itoophiyaarratti ibsa waloo ji’oota jaha dura erga baasee hanga ammaa baasuu kan hin dandeenyeef biyyoota shan aangoo ‘Veto power’ qaban keessaa Raashiyaafi Chaayinaan ”dhimma keessaa Itoophiyaa keessa hin gallu” jechuun isaaniitiini.
Erga waraanni Itoophiyaa eegalamee Manni Maree Nageenyaa UN ibsa waloo yeroo baasu kun isa lammataati.
Manni Marichaa wixinee ibsa waloof fudhatama kenne malee mariin banaan Jimaatatti gaggeessuuf karoorfamee ture gara Wiixataatti dabarfameera.
Manni marichadhimma waraana Itoophiyaarratti amma dura yeroo kudhan mariyateera.
Sababa waraana Kaaba Itoophiyaatti dhalateen naannolee Tigraay, Amaaraafi Affaar keessatti walumatti namootni miiliyoona torbaa ol ta’an deeggarsa namoomaa akka barbaadaniifi Tigraay keessatti qofa namootni walakkaa miiliyoonaata’an fiixee beelaarra jiraachuu UN ibseera.
Gabaasaan Kan BBC Afaan oromooti